Benishaangul Gumuz: Baqataa dawoo baqattootaa keessatti gamoo abbaa darbii lamaa ijaarrate - BBC News Afaan Oromoo
Benishaangul Gumuz: Baqataa dawoo baqattootaa keessatti gamoo abbaa darbii lamaa ijaarrate
Image copyright REPAN
Goodayyaa suuraa Reeppaan mana ijaare fuuladura dhaabatee mul'ata
Reeppaan Saadiiq jedhama. Kan duuba isaatii mullatu kun ammoo mana jireenyaa abbaa gamoo lamaa buufata baqattoota Sharkollee Naannoo Benishaangul argamu keessatti harka isaatiin ijaaredha.
Gamoo kana ijaaruuf baatii torba itti fudhate.
Reeppaan yeroo jalqabaatiif Itoophiyaa kan dhufe umurii waggaa tokkotti ture. Kunis wayita walitti bu'iinsa Sudaan keessatti uumameen walqabatee maatii isaa waliin wayita gara Itoophiyaatti baqatanitti.
Waan wayita sana ture baay'ee yaadachu baatulleen, yeroo lammaffaaf baqattummaan gara Itoophiyaa deebi'uun dirqama itti ta'eera.
Yeroos dargaggeessa umurii 25 tahe haadha warraafi ijoollee isaa 6 qabatee waggaa 14 har'aa kan dhufe.
Ergasiin booda jireenya isaas buufata baqattootaa Sharkollee Naannoo Gambeellaatti argamu taasifate.
Reeppaan naannichatti beekamaadha. Beekkamtiin isaa kunis kaampiicha bira darbuun hanga Finfinneetti yeroo itti gahees tureera. Hojiisaas yeroo garaa garaatti kaampiiwwan baqattootaa adda addaatti agarsiiseera.
Gaaffii Reeppaan eenyu? Hojiiwwan attam hojjata? Hojiiwwan isaa maaf dinqisiisoo ta'an? jettanii kaasuun keessan hinolle. Kunooti.
Sharkoolleetti meeshaalee heddu akka garaatti argachuuf rakkatulleen, Reeppaan meeshaalee kaampicha keessatti argatuufi kanneen hojiirra oolanii gataman walitti qabuun hojiiwwan dinqisiisaa ta'an hojjataa tureera.
Reeppaan guyyaa guyyaa dhaabbata kaampicha bulchu bira hojjata. Halkan ammoo hojii isa gammachisu hojjachuun osoo hinrafiin halkan dabarsa yoo jedhame dhara hinta'u.
Reeppaan wayita Sudaan tureetti ogummaa hojii mukaa qaba ture. Abbaan isaas ogeessa sibilaafi mukaa turan.
Kanaafu, Reeppaan erga gara Itoophiyaa dhufeen booda halkan kan rafu sa'aatii sadii qofaafi.
Kan hafe hojiiwwan harkaa itti gammadu hojjachuun dabarsa. Guyyaa kaampicha keessatti Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii waliin ijoollee baqattoota ogummaa harkaa barsiisaa ola.
Maatiisaatiif mana jireenyaa baatii torba itti fudhate erga ijaaree xumureen booda, Reeppaan harkasaa maratee hinteenye. Hojiiwwan harkaan hojjataman irratti xiyyeeffachuun hojjata.
Suuta suutaanis meeshaalee manichaaf isa barbaachisu guuttate. Meeshaa bishaan ho'isu, kan qilleensa qabbanneessuu fi kkf hojjate.
Guyyaa Baqattoota Addunyaa bara kana kabajameerrattis Reeppaan gara buufata baqattootaa dhiheenyasaatti argaman gara Baambasii imalee ture.
Meeshaa muziiqaa hojjate kan adda tokko qabachuun deemuun muziiqaawwan naannoolee garaa garaa xabachisuun sirna kabajaarratti hirmaateeera.
Kana malees, qabduu (memory card) muuziqaa kan dandeettii sirbawwan 72 qabachuu danda'u almuniyemii irraa hojjateera.
Meeshaaleen hojiisaa hojjachuuf itti gargaaramu irra caalaan muka, leemmana, almuniyeemii fi kaartoonii bira hindarbu. Isaan kunneenis kan haala salphaatti argachu danda'amanidha.
Reeppaan wayita ammaatti baqattoota buufatichatti argaman hundaaf mana kan isaa fakkaatu ijaaruuf fedhii akka qabu dubbata. Mana ijaaruus haala namoonni dhaqanii dowwachuuf mijatuutti ijaaruuf karoora qabaachu hima.
Wayita ammaa kanattis mana jireenyaa isaa haala mana ammayyaa jedhamuun guuttachaa jira.
''Yeroo tokko tokkoos waan na barbaachisan bitachuuf wayitan bahuutti, namoonni dhufanii meshaa na jalaa yoo fudhatan kutaa to'annoo kiyya keessa galuun waan umamee hunda ilaaluun danda'a,'' kan jedhu Reeppaan, meeshaan to'annoo hojjatee waan hunda waan waraabee eeguuf irra deebiin xabachiisuun ilaalu dandeessisa.
Reeppaan yaada kalaqaa dhufuuf hunda ni hojjata. Isaafuu osoo irribni isa hindagiin. Reeppaan guyyaa gutuu hojiiwwan garaa garaa hojjachuuf fiigaa kan oolu yoo ta'u, halkan sa'aa 2 hanga 3 qofa rafuun kaan hojiin dabarsa.
'Hirribaaf yeroo hangas hinqabu' jedha.
Darbee darbees rafuun dirqama yeroon itti ta'u jira. Yoom? yoo jedhame ammoo 'yaadawwan abjuu fakkaatan hojiitti geeddaruuf rafuun dirqama ta'a' jedha.
''Buna dhuguun halkan hojiin dabarsa. Garuu, gara hojiitti kanan galu ergan yaadicha sammuu kiyyatti yaadee waanan hojjadhu adda baaseen booda qofaadha,'' jedha.
Reeppaan meeshaalee kanneen yoo hojjatu kan itti fayyadamees, kanneen haala salphaatti argaman yoo ta'u, hanga ammaatti kan isa rakkise meeshaaleen kunneen dhagaa baatiriitiiin hojjachusaanii qofaadha.
Waljalaanis akka annisaa aduutiin hojjatan taasisuuf akka yaadaa jiru kan dubbate Reeppaan, yoo xinnaate meeshaan bishaan ho'isuu akka aduun hojjatu taasisuuf akka yaadu nutti himeera.
Jireenyi baqattoota Oromoo Keenyaa keessaa maal fakkaataa?
Kennaa fi hojiiwwan kalaqaa Reeppaan hojjataa jiru kan nama dinqisiisan ta'ulleen, kaka'umsi ilma isaa waggaa sagalii akka isa gammachiisu ibsa.
Gara fuula duraattis ilmasaa waliin hojiiwwan hedduu akka hojjatuu fi ogummaawwan abbaa isaa irraa argate gara mucaa isaatti dabarsu danda'usaatti gammadu isaa ni dubbata.
Reeppaan ''kanan hawwu tokko yoo jiraate, namoonni buufata baqattootaa keessatti argaman hundi mana ijaaru akka danda'an taasisuudha,'' jedheera.
Atileet Firaa’ol Eebbisaa: ‘Waggaan torba umurii kiyyarraa akka gubatettiin yaada’
Lakkoofsi baqattoota Afriikaa daangaa US'tti qabaman dabale